Izinhlobonhlobo zezintaba ze-ice eMoscow ziyamangalisa. Ukuvulwa nokumbozwa, ama-rinks emini kanye nobusuku, i-nature yemvelo neyakheka eqhweni, ebuye yenzelwe ukuqasha. Kubuye kubalulekile ukuthi kulezi zikhungo ungakwazi ukuchitha isikhathi kahle kanye nezinzuzo zezempilo.
Bheka ibalazwe laseMoscow, elibheke izindawo eziningi zezempilo zeqhwa. Sizokutshela ngama-rink ezithakazelisayo nezithandwayo ezithandwa kakhulu kwi-capital for the season esizayo ebusika 2015-2016.
Idolobha linikeza amathuba amaningi kubalandeli bemisebenzi yangaphandle kwi-skates. Kunezinkinobho eziningi zokudoba edolobheni, zikhona kuzo zonke izindawo. Uzokwazi ukukhetha indawo lapho kuzoba khona khona ukuthi ufike lapho. Awukwazi ukugibela nje indlela yendabuko - usuku lwebusika emoyeni ovulekile echibini elifriziwe, kodwa futhi ukuvakashela i-ice rink yangaphakathi, ukugibela iqhwa lokufakelwa. I-ice rink yokufakelwa inezinzuzo zayo - umoya webusika ngeke ushise amahlathi akho bese ubanda imphunga yakho.
Uma ngokungazelelwe isifiso sokugqoka izikhwama bese udonsa ngendlala ebusweni obunzima, noma ubhala phansi iziketi ezinezintambo eziyinkimbinkimbi, kuzokufica ekukhanyeni kokuhlwa, uzokwazi ukwanelisa ukuvakasha kwakho ngokuvakashela noma iyiphi i-rink ehamba phambili ehamba phambili enhloko-dolobha. Yebo, yebo, isikhathi eside kukhona izinto ezinjalo ezinhle - ama-night roller eMoscow.
Vula ama-ice rink eMoscow
Uma ungesabi ubusika obusika, futhi ufuna ukuzwa yonke inhlanhla yomoya okhanda, ama-rinks evulekile e-ice skating asevisi yakho. Izinhlu eziningi zemikhumbi evulekile yokudoba zingabonwa kwi-intanethi, zibuza i-Yandex noma i-Google ngakho.
I-Gorky Park of Culture ingumnikazi weplanethi enkulu kunazo zonke evulekile e-Moscow. Lapha, amathuba okusebenzisa usuku lonke elihle kakhulu alinqunyelwe. Ukungena kukhululekile, kodwa ku-wardrobe kufanele ulinde isikhathi sakho.
Emathonjeni kaMatriarch, eyesibili ngobukhulu beqhwa yi-ice rink evulekile yamahhala eMoscow. Amachibi - isilungiso semvelo, ngakho-ke ungakwazi ukugibela lapha lapho iqhwa lizophendulela ebhodini libe yiqhwa elilukhuni. Awekho amakamelo okushisa afudumele lapha, kodwa ungakwazi ukukhipha ngasiphi isikhathi sosuku mahhala.
Enye yezokuzilibazisa ebusika eyaziwa kakhulu enhloko-dolobha yi-rink yokudoba e-Hermitage Garden, i-Caretny Row, indlu 3. Ihlukaniswe izingxenye ezimbili: enye encane, eyodwa ngezemvelo, eyodwa enkulu, eneqhwa elenziweyo. Njengengxenye ejabulisayo, iHermitage Garden ingahlinzeka i-café encane enhle lapho ungakwazi ukufudumala khona indebe yekhofi noma itiye ngebhande elimnandi. Ukugqoka lapha emakamelweni okushisa okufudumele.
Yonke injabulo izokukhokhela kusuka kuma-ruble angu-150 kuya kwangu-250 ngehora. Amashadi aqasha ama-ruble angu-150 ngehora. Ngokuba ikhabethe kufanele ikhokhe ama-ruble ama-50.
Ice rink "Ubusika baseRussia" kuPetrovka ungumdlali weqhwa laseMoscow, isimo sawo esinobuhle sinobuhle sinikeza ukuthula kwengqondo nomoya omuhle.
I-ice rink e-Moscow
Ama-rinks evaliwe, efana nawo wonke ama-artificial, afanele ukuthi angasebenza ebusika ebusika nasebusweni behlobo.
Isigodlo sabantu abahamba nge-skating abalandeli e-Krylatskoye yi-rink enkulu kunazo zonke yokudoba i-skating eMoscow. Izimo eziduduzayo zidalwa ngokuhambisana nomculo we-skating, indawo yokudlela eqhweni. Imali yokuzijabulisa ngeke ikubeke enkingeni: abantu abadala bazokhokha ama-ruble angu-300 ukushayela emini, izingane ezingu-150 zizothathwa ezinganeni, kanti abafundi bazokhipha ama-ruble angu-200 ngamunye.
I-ice rink yokuqala yokufakelwa - "E-Arc de Triomphe". I-platform enhle yeqhwa inikeza izinsiza ezihlukahlukene.
EMoscow, futhi i-rink ethandwayo yesikhumba semikhumbi yangaphakathi - "Crystal" eLuzhniki (esitimeleni "Sports", "Vorobyovy Gory", iLuhnhnetskaya nab., INdlu 24). Ikhwalithi evelele yeqhwa, sizihlolile, sincoma.
Kukhona i-ice rink enezinto ezibonakalayo eMoscow - i-rink Lokinktiv skating rink, ihlanganiswe. Lapha ungakwazi ukuqasha izitifiketi, imvelaphi yomculo, i-buffet, kunezindawo lapho ungashintsha khona izingubo.
Kuphi ukudoba ebusuku: ama-night skating rinks eMoscow ngenkathi yasebusika 2015-2016
Intsha entsha yezakhamizi, ijabulela ukwanda nesithakazelo - ukuhamba ebusuku ebusuku eMoscow. Lokhu ukuzijabulisa okungavamile, futhi kubiza okungaphezu kokujwayelekile, kodwa kuyafaneleka!
I-Ice Palace "iMorozovo", i-night night roller enezintengo ezifanele kakhulu. Ungakwazi ukukhipha okuningi ngendlela oyithandayo.
I-rink yokudoba egumbini eneqhwa lokufakelwa, i-skating rink CSKA, ikuvumela ukuba usebenzise ubusuku bokuhamba ngezintaba izinsuku ezimbili ngesonto. Zonke izinto ezibonakalayo ziyabonakala: kukhona lapho ongashintsha khona izingubo, udle lapho ungaluma khona, ungaqasha izitifiketi, futhi ungazithwali owakho. Yonke injabulo - ama-ruble angu-250 ngehora, ukuhlaziya iziketi kuzobiza ama-ruble angu-200.
Ama-Muscovite amancane ahlonipha isiteji seqhwa "Amaphiko aseSoviet", asebenza ebusuku. Ekufuneni ukujabulela ukuhamba kwezulu akukho ukusweleka, kukhona i-discs eqhweni, imincintiswano ehlukahlukene.
I-Red Square ebusika, futhi, ikuvumela ukuba uphumule ngokugcwele emadolobheni asezindaweni ezihlala phansi. I-rink yokudoba ivuleka ngoDisemba, umqondo omuhle - umhlangano wendawo entsha, i-2016 skating eduze nemibhoshongo yaseKremlin. Iqhwa elihle, iziketi zokuqasha, ibha yokudla, lapho uzonikezwa khona ukudla okumnandi nokushisayo.
Imithetho embalwa yeholide enempilo ngempela
Ukwelashwa kwezobuciko: ukucabanga okucabangelayo
Amazwi kaCarbon avela kumanethiwekhi omphakathi: Laba bantu abagibeli ephaketheni igama :)))
I-Kurban Bairam ngo-2015: iyiphi inombolo eqala eTurkey, Uzbekistan, Dagestan, Moscow, Kazan
Izakhiwo eziwusizo ze-parsley
Sandwich nge-mozzarella ushizi
U-Alexander Malinin wabamba ubaba wakhe ngamanga, ividiyo
Ikhukhamba Gin ne-tonic
Ngingalahlekelwa kanjani isisindo ngaphandle kokudla kanye namaphilisi?
Isaladi ngekhukhu elibhemayo kanye ne-lavash